MCSA nohamorain'ny Professional - Fanontaniana sy valiny fanadihadiana | NY
MCSA nohamarinin'ny Professional - Fanontaniana sy valiny fanadihadiana
Manolotra mari-pankasitrahana marobe maromaro i Microsoft izay ahafahan'ireo Microsoft Certified Solutions Associate na MCSA mari-pankasitrahana anao amin'ny fahaiza-manao manan-danja mba hampitsaharana ny mombamomba ny solosaina PC na ny talen'ny PC. Hamotopototra fanontaniana momba ny mpivady ny ankamaroan'ny fanontaniana nangatahana tamin'ny Professional Professionals Certified MCSA.
1. Inona no fizarana fampiharana?
A: Partition fampiharana dia lahatahiry parcels izay miverina amin'ny rafitra mpanara-maso. Ireo dia ampahany amin'ny rafitra Active Directory. Ireo mpandrindra ny habaka tafiditra ao amin'ny paikan'ny parcels amin'ny lahatahiry dia manana famolavolana an'io segondra io. Ny toetra sy ny toetoetran'ny fampiasana ny fampiasana ny fampiasana dia mety hampihena ny fihetsiketsehana. Ireo sehatra fampiharana dia afaka mifantoka amin'ny sehatra iray ao amin'ny faritry ny faritra izay tsy misy toy ny segondra amin'ny faritra. Izany dia mahatonga azy ireo ho mora kokoa sy ho be loatra.
2. Inona ny faritra misy ny tahiry Active Directory?
A: Ny tahiry Active Directory dia afindra amin'ny mpiandraikitra ny faritra ary azo alaina amin'ny alalan'ny rindrambaiko amin'ny tambajotra. Ny faritra rehetra dia afaka manara-maso ny toerana ary mitazona duplicate amin'ny tahiry Active Directory ao amin'ny C: \_ windows \_ Ntds \_ Ntds.dit
3. Inona ireo toetra vaovao naseho tao amin'ny Active Directory ao amin'ny Windows server 2008?
A: Vakio fotsiny ny fitantanana ny faritra sy ny fitsipi-pahasalamana tsara indrindra
4. Inona ny Windows Server Backup?
A: Windows Server Backup dia singa iray entina ho an'ny Windows 2008 izay manome vahaolana samihafa amin'ny fampidinana ny fampahalalana ao amin'ny PC anao raha toa ka misy ny fanehoan-kevitra fahadimy na olana hafa. Ny Windows Server Backup dia afaka manamafy rakitsoratra roa amin'ny server manontolo. Ny fanamafisana ny serivisy dia azo henoina amin'ny alàlan'ny filaminana sy ny fanomezan-toky amin'ny fitantanana.
5. Inona no mandeha amin'ny rakitra?
A: Ny famakivaky ny takelaka dia takelaka fitrandrahana ampiasaina amin'ny fametrahana faribolana virtoaly ary manana rafitra fandrefesana sy rakitra.
6. Inona avy ireo mpamily sendikà?
Ireo fiara mifono vy dia manavaka sy ambony noho ireo emule ao amin'ny asany. Tsy mandika programa iray hafa izy ireo, fa toy ny hoe, ataovy toy ny kitapo iray hafa ny gadget hafa.
7. Inona no atao hoe virtoaly virtoaly?
Ny virtoaly Desktop dia fomba fanao mahazatra sy manala ny OS na ny rafitry ny mpanjifa izay vonona ny hiditra ao. Misy karazana virtoaly maro karazana ny sasany izay mampiditra masinina virtoaly nefa ny sasany aza tsy misy. Raha toa ka ny rafitra miasa no mifehy azy manokana dia mila miditra amin'ny biraony ny mpanjifany amin'ny alàlan'ny tambajotra fantatra amin'ny fivoriamben'ny fivoriambe. Ny fanomanana ny virtoaly virtoaly dia atao ao amin'ny toeram-piompiana mpamokatra server. Amin'ireny andalana ireny, ireo fampiharana toy ny tablette dia afaka miditra miaraka amin'ny Host virtual machine. Ity milina virtoaly ity dia azon'ny olon-tsotra atolotra azy ary afaka manova ny fomba ilainy izany. Izany no fomba mahazatra indrindra sy mora ampiasaina amin'ny fidirana sy fampiasana virtoaly virtoaly.
8. Inona no atao hoe cache?
Ny BranchCache ™ dia natao hanatsarana ny fahaiza-manaon'ny mpampiasa ary hampihena ny fampiasana ny fifandraisana WAN mba ahafahana manokatra amin'ny tambajotra lavitra ny serivisy. Ny PC afovoany dia mampiasa cache ny fampahalalana izay voatahiry eto an-toerana mba hampihenana ny hetsika amin'ny LAN mifandray. Azo afindra amin'ny serivera ao amin'ny sampana (Hosted Cache) ny cache na azo ampiasaina mifanandrify amin'ny ordinateran'ny mpanjifa (Famaranana Cache Distributed).
9. Inona no atao hoe Access Direct?
Access Access dia manome alalana ny mpanjifa mba hiditra amin'ny tranokala, fampiharana ary ny rakitra ao anaty tambajotra anatiny tsy misy ifandraisany amin'ny tambajotra virtoaly virtoaly (VPN). Ny tranonkala anatiny dia antsoina koa hoe tambajotra manokana na intranet. Isaky ny mijery Internet PC mivantana ahafahana miditra amin'ny aterineto, na inona na inona mety hitranga alohan'ny fidirana an-tsoratra, ny Direct Access dia mametraka fifandraisana mivantana amin'ny tambajotra anatiny. Tsy mila mandinika ny fifandraisana amin'ny intranet ny mpividy. Ny ordinatera remote dia afaka manara-maso ny asa ivelan'ny toeram-piasan'ny IT, na dia tsy mifandray amin'ny VPN aza ny ordinatera.
10. Inona ny DAC?
Ny Microsoft Dynamic Access Control na DAC dia fitaovana fitantanana vaovao ao amin'ny Windows Server 2012 izay ahafahan'ny mpizara manitsy ny fidirana fidirana. Mampiasa fomba fijery mifantoka izy mba ahafahan'ny mpikarakara mandinika izay manakaiky ny rakitsoratra manokana. Ny tahirin-kevitra dia azo alaina ara-batana na ara-boajanahary.